mai 2015 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Vao avy nankalaza ny Niakaran’i Jesoa tany an-danitra isika ny Alakamisy teo. Tamin’io no nametrahana ny hafatra tamintsika fa rehefa niakatra tany an-danitra i Jesoa, ireo mpianatra izay teo dia variana niandrandra ny lanitra. Raha mbola variana nijery ny lanitra izy ireo, dia indro nisy roa lahy ,tonga nidina teo amin’izy ireo, nanafatra azy ireo hoe: “Ry olona avy any Galilea, nahoana no mijanona fotsiny eto ianareo mibanjina ny lanitra? Iny Jesoa nakarina teto aminareo iny dia mbola ho avy indray.” Izany hoe: amin’ny fiainana maha-kristianina dia tsy ampy ny miandrandra ny lanitra fotsiny. Tsy ampy ny hoe: “efa mivavaka aho”, fa adino fa mbola eto amin’izao tontolo izao isika. Nirahina isika tsy hijanona amin’ny toerana anankiray, fa ilaina ny mivoaka. Izay ilay fiainana kristianina: misy fiaingana mandrakariva, ary misy fivoarana amin’ny tena mandeha ho any amin’ny hafa, hitory ny Vaovao Mahafaly. Rehefa niakatra any an-danitra i Jesoa dia izao no hafany hoe: “Mandehana ianareo amin’izao tontolo izao, mitoria ny Evanjely amin’ny voaary tontolo.” (suite…)
Continuer la lecture Alahady faha-fito Paka – 17/05/2015 – Toriteny
Evanjely Masina nosoratan’i Md Joany (Jo 17,11b-19) (suite…)
Continuer la lecture Alahady faha-fito Paka – 17/05/2015 – Tenin’Andriamanitra
Toy izany ny fiainantsika Kristianina. Amin’ity Evanjely rentsika teo ity dia misy teny roa miverina matetika: ny teny hoe “mitoetra” dia miverina im-balo (8) ary ny hoe “mamoa” miverina inenina (6). Matoa Andriamanitra mamboly dia manantena hioty vokatra tsara Izy. Isika izany dia tsy maintsy miray amin’ny fototra izany hoe amin’ny Jesoa Kristy; tsy ho tsara anefa ny vokatra raha tsy rantsanana isika. Ka inona ary ny hevitry ny hoe rantsanana? (suite…)
Continuer la lecture Alahady faha-dimy Paka – 03/05/2015 – Toriteny
Ny foto-boaloboka sy ny rantsany – Ny fifankatiavana – Halan’izao tontolo izao ny mpianatr’i Jesoa. (suite…)
Continuer la lecture Alahady faha-dimy Paka – 03/05/2015 – Tenin’Andriamanitra